Moschino मजेदार (Moschino Fanny) - गर्मीको समयमा एक हल्का हवा
सौन्दर्य, प्रसाधन सामाग्री
हाम्रो समयमा यो विभिन्न प्रकारको ईत्र को भूमिका को कम गर्न गाह्रो छ, जुन सबै हाम्रो अलमारियों मा ठूलो र ठूलो संख्या मा प्रकट हुन्छ। स्वाद र चरित्र दिएर सम्भवतः गाह्रो हुने छैन, तपाईंको लागि सही छान्नुहोस्। अरोमामा साँच्चै अचम्मको गुणहरू छन् - एक क्षणमा उनीहरूको उत्साह गर्न सक्षम हुन्छन् , सम्झनाहरू जगाएर वा केवल केही घनिष्ठ र प्रिय व्यक्तिसँगको सहयोगको रूपमा सेवा गर्छन्।
Moschino ब्रान्डको इतिहास
म महिलाहरु को इत्र को उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसलाई Moschino मजेदार भनिन्छ ("Moschino Fanny")। सुरू गर्न, हामी Moschino ब्रान्ड को इतिहास को एक संक्षिप्त परिचय प्रदान गर्छन र Moschino शौचालय को पानी को निर्माण को लागि मुख्य आवश्यकता के थियो बुझें।
त्यसोभए, सबै कुरा टाढा 1950 मा धूप इटालीमा सुरु भयो। देशको उत्तरमा अबीबेट्रासोसो भनिन्छ। यो यसको परम्परा र परम्पराहरूका लागि प्रसिद्ध छ, जुन वर्ष देखि वर्ष मनाईन्छ। यो 1950 मा फ्रान्को Moschino को जन्म भएको थियो, जो पछि इटाली को बाहिर दूर प्रसिद्ध थियो।
कपडा कारखानाको मालिकको परिवारमा जन्मेको फ्रान्कोले निर्धारित पारिवारिक परम्पराको उल्लङ्घन गर्ने निर्णय गरेन र मिलानको फाइन आर्ट्स अकादमीमा अध्ययन गर्न गएका थिए, जुन उनले 19वर्षको उमेरमा स्नातक गरे। Illustrator संग आफ्नो क्यारियर शुरू गर्दै, फ्रान्को केहि वर्ष पछि Gianni Versace (Gianni Versace) संग मिले, जो पहिलो नजर मा युवा प्रतिभा को निर्माण को सराहना गरे र उनको कम्पनी को लागि काम गर्न को निम्तो दिए। त्यहाँ, Versace र अन्य तारकीय फैशन डिजाइनरको कम्पनीमा, फ्रान्को लगातार र जोसिलो रूपमा उनीहरूको डिजाईन क्षमताहरू पूरा भए, यसको अप्ठेरो आफ्नै संग्रह हो, जुन 1970 मा प्रकाश देख्यो। फ्रान्को Moskino रचनात्मकता को हाइलाइट अन्य डिजाइनरहरु को कारण उनको तथ्य थियो कि यसैले उनले हरेक दिन चीजहरु बनाई, न सिर्फ त्यो उत्सव र विभिन्न सामाजिक घटनाहरु को लागि बनाइयो। त्यसैले, 1983 सम्म, फ्रान्को आफ्नै फैशनी घर बनाउन थाल्यो।
सबै कुरा सुरु भयो, सामान्यतया हुन्छ, कपडेका साथ, तर एउटै नाम, गहने, थैला र निस्सन्देह, इत्रको सामानको साथ समाप्त भयो।
पहिले नै ब्रान्डको संस्थापकको मृत्यु पछि Moschino, शौचालय जल द्वारा एक विशेष रंग र मूल्याङ्कन प्राप्त भएको थियो। यसको लगभग पन्द्रह वर्षको इतिहासको लागी इष्टम मोस्चिनो 10 भन्दा बढी विभिन्न भिन्नताहरुमा रिलीज गरिएको थियो, जसको प्रत्येकको आफ्नै अनौठो गन्ध छ। वैसे, यो ध्यान दिनु पर्छ कि फैशन घर को फ्रेंको मालकिन को मृत्यु इटली Rosella Jardini (Rosella Giardini) मा जानिन्छ
Moschino मजेदार ("Moschino Fanny") 2007 मा रिलीज गरियो र पहिलो दिनमा प्रशंसकको एक ठूलो संख्या हासिल गर्यो। अंग्रेजीमा "मजेदार" शब्दको अर्थ भनेको "हंसमुख, चंचल, उत्तिकै" हो। यी उपत्यकाहरूले यो स्वादलाई पूर्ण रूपमा देखाउँछन्। परम्परागत रूपमा, "Moschino फनी" शीर्ष नोटहरू - कडा नारंगी, रातो कारागार र निश्चित रूपमा गुलाबी काली मिर्च-माध्यम नोटहरू (पीनी र जास्सिनको थोपा चुरोट सुगन्ध), र अन्तमा, आधार नोटहरू (देवदार, मास्क र एम्बर) जोड्दछन्। यी सबै अवयवहरूले "Moschino Fanny" सुगन्ध साँच्चै चपचाप, रोशनी, हावा, थोपा फ्लाइ र यसको जस्तै केही पनि बनाउँदछ। गंध मुख्यतः युवा हो।
यो इत्र सबै संसारमा केटीहरु र महिलाहरु लाई सराहना गर्दछ। सम्भवतः, तपाईं Moschino Fani को सुगन्धमा पनि बेपरिवार रहनु हुनेछैन।
स्नान कालोका लागि साबुन: समीक्षा, रचना। हजुरआमाको अनुहार साबुन
वेट: डिप्लुलेटको लागि स्ट्रिप्स ले लामो समयसम्म छालाको चिकन बनाउनेछ!
अनुहार क्रीम "लोरल" - कोमल र प्रभावकारी हेरविचार
इत्र बिरबेरी: एक कुलीन सुगंध को संसार
कसरी "Faberlic" सल्लाहकार हुन: दर्ता प्रक्रिया
Gucci "दोषी तीव्र" संग एक उत्सव को दोषी आफैलाई महसुस गर्नुहोस्
पहुँच-आकार। डाटा प्रविष्टि लागि फारम सिर्जना
गज्मेनियाको फूल: हेरविचार र पुनरुत्थान
"मर्सिडीज W204": वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा
को मास्को क्षेत्र मा आराम: पेन्सन "Petrovo सुदूर"
कसरी स्क्रैप सामाग्री बाहिर आफ्नो हात संग बगैचा सजाने? फोटो
वृद्धि रक्षक - यो के हो? कम्प्युटरको लागि वृद्धि रक्षक
जब puppies आफ्नो आँखा खोल्न? नियम र सुझाव
पर्यटन र यात्रा: देखि मास्को Diveevo गर्न माले
कुन ट्याब्लेट अझ राम्रो छ: एप्पल वा सैमसंग